တခုခုဆိုရင် ညီမလေး မသိဘူး » နှင်းနုလွင်
« ချစ်ခြင်းဖြင့်သာ ရေးခဲ့ပါသည်
တခုခုဆိုရင် ညီမလေး မသိဘူး	Categories: ကဗျာများ
by နှင်းနုလွင်	June 6, 2011	မြစ်တစ်စင်းရဲ့ ဟိုတစ်ဘက်ကမ်း
တစေ့တစောင်းလေးတောင် ညီမလေး မသိဘူး။
04၊ 06၊ 2011
Permanent link to this article: http://hninnulwin.com/archives/1581
June 6, 2011 at 10:56 am	(UTC 0)
Reply အချစ်နဲ့နွေးမြရာ ရပ်ဝန်းအကြောင်း တစေ့တစောင်းလေးတောင် မသိဘူး။ ( :
June 7, 2011 at 2:54 pm	(UTC 0)
Reply အချစ်အကြောင်းတွေ ညီမလေးကိုလည်း မသိစေချင်သေးဘူး။
June 15, 2011 at 3:03 pm	(UTC 0)
January 9, 2012 at 6:36 pm	(UTC 0)
Reply မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့လားရှိုးကပါ ဒီဆိုဒ်လေးထဲ မှာ
ကဗျာတွေကို ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်မိပါတယ် ဒီထက်မကရေးနိုင်ပါစေနော်
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော့ကို ကဗျာ လေးတွေလက်ဆောင်ပေးပါလားခင်ဗျာ
ကျွန်တော့ရဲ့ ကိုယ်မပိုင် ဆိုဒ်လေးမှာ တင်ချင်လို့ပါ ခင်မင်မှုကို
အသိမှတ်ပြုပေးပါလို. တောင်းဆိုပါရစေ ခင်ဗျာ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကိုလည်း
လာလည်စေချင်ပါတယ် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Email:kokolashio@gmail.com
March 23, 2014 at 1:50 pm	(UTC 0)
Reply Thanks Hnin Nu Lwin. I remember my life as student at RIT. Then we
also have ကံကော် in RIT near block 1 &2and our hostel
E-block. please visit our blog also. ကုလားမင်းသား စရကား။
Website: four ×5= Message: *
*ဇ* (2,130)တခုခုဆိုရင် ညီမလေး မသိဘူး (1,816)တိမ်ညွှန့်စားတဲ့ စုန်း (1,489)အဆီကျဆေးများ (1,427)အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်း (965)ဗိုက်ထဲက အဆီ (927)ရိုးရှင်းသော ဘ၀အဖော် (922)နှလုံးသားများ မနွမ်းစေချင်ပါ (908)ရေကိုစည်းခြား…အကြားမထင် (845)အစာအိမ်ရောဂါပျောက်ဆေးများ (828)“ လှုပ်ခတ်နေသောကုန်ကြမ်း” (782)မှိုသတ်ဆေးများ (723)*အကောင်းတစ်ကွက်ရှိပေမယ့် အရှည်သဖြင့်တော့ ပေါင်းဖက်ရန်မလွယ်* (707)ချစ်သင့်တာကို ….မွန်မြတ်စွာနဲ့ ……..ချစ်တတ်ခဲ့ပါပြီ။ (651)*ဖိနပ်ဖိုး* (637)